Madaxweyne Biixi Oo Ka Hadlay Ahmiyada Dekedda Berbera U Leedahay Somaliland Iyo Dalalka Gobalkaba | Berberatoday.com
Madaxweyne Biixi Oo Ka Hadlay Ahmiyada Dekedda Berbera U Leedahay Somaliland Iyo Dalalka Gobalkaba
September 22, 2019 - Written by admin
Hargeysa(Berberatoday.com)-Madaxweynaha JSL Muuse Biixi Cabdi ayaa dekedda Berbera ku tilmaamay mid muhiim u ah inta badan dalalka Afrika.
Warbixinta oo uu Geeska Afrika soo turjumay ayaa waxay u dhignayd sidan “Tan iyo markii ay Somaliland ku dhawaaqday inay ka madax-banaan tahay Somaliya 28 sanadood ka hor, Somaliland waxay la halgantay maaligelin la’aan, faqri iyo kaabayaasha dhaqaalaha oo liita.
Madaxwaynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi, wuxuu ku tilmaamay Berbera “albaabka ku xidha dalal badan oo Afrika ah dunida.” ““Berbera waxay muhiim u tahay Somaliland, Geeska Afrika iyo inta badan ee dalalka badhtamaha Afrika.
“Dhinaca bari, ilaa Eeshiya, qaarad yaraha Hindiya, ilaa Shiinaha. Dhinaca kale Kanaalka Suwiiska marka la sii dhex maro, waxaay isku xidhaa dalal badan oo Afrikaan ah Bariga Dhexe, Yurub, ilaa Woqooyiga Ameerika.”
Supachai Wattanaveerachai, oo ah madaxa fulinta ee dekedda, ayaa yidhi “hadafkayagu waa inaanu ka dhigno Berbera xarun badeed oo heer gobol ah iyo albaab u furan Itoobiya, iyo sidoo kale inaanu u furno dadka Somaliland suuqyo cusub.”
“Waxaannu qabaa in mustaqbalku soo ifayo. Maalgelinta dekedda lagu sameeyey waxaay furfuraysaa wax badan oo Somaliland ka dhacaya kuwaas oo ay xaqiiq tahay inay abuurayaan shaqooyin, ayna gelinayaan rajo dhalinyaro faro badan.”
“Shacabkayagu waa mid aad u da’ yar. Ilaa 70% waxaay ka yar yihiin 30 jir. Waxaannu aaminsanahay in marka la isku daro dekedda iyo wadada Berbera ee isku xidhaysa Berbera iyo Itoobiya, iyo aagga xorta ah oo lagu sii daro gegida diyaaradaha ee caalamiga ah, kaabayaashaas dhaqaalaha oo dhan markaad isku gayso waxa abuurmaya awoodda loo baahan yahay si loo daboolo baahida loojistik ee gobolku qabo.”
Waxaay u sheegtay Connecting Africa: “dib u dhacyo ayaanu kala kulanaa dekedda. Marka alaabtu timaado waa inaad mudo sugtaa sababta oo ah dekeddau way yar tahay mana haysato qalab casri ah. Waxaannu maqalnay in marka la balaadhiyo in dib u dhacyadaasi ay gebi ahaanba meesha ka baxayaan.”